Dildilaacyada tareenada xawaaraha sare ku socda waxay sababaan 'carqalad weyn' howlaha tareenka ee UK
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka UK » Dildilaacyada tareenada xawaaraha sare ku socda waxay sababaan 'carqalad weyn' howlaha tareenka ee UK
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Safarka Tareenka • Waajib ah • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK • Wararka kala duwan
Howl wadeenada tareenka ayaa bilaabay baaritaano deg deg ah oo ku saabsan tareenadooda xawaaraha sare ku socda kadib markii dildilaac laga helay gawaarida
Rakaabka ayaa looga digay dib u dhac iyo adeegyo la joojiyo
Go'aanka ayaa la gaadhay kadib markii la helay dildilaacyo xariiqa timaha inta lagu guda jiray dayactirka joogtada ah ee laba tareen oo Hitachi 800 ah
In ka badan 1,000 tareen oo ka socda diyaaradaha GWR iyo LNER si loo baaro
The Tareenka Waqooyiga Bari ee London (LNER), Tareenada Hull, Tareenka Weyn ee Galbeedka (GWR) iyo TransPennine Express (TPE) ayaa hakiyay adeegyadii ka bixi lahaa London subaxnimadii Sabtida. Tani waxay ka dhigan tahay in adeegyada tareenka ay xadidanyihiin inta udhaxeysa Edinburgh, Newcastle upon Tyne, York, iyo London.
Howlwadeenada tareenka ayaa bilaabay baaritaano deg deg ah oo ku saabsan tareenadooda xawaaraha sare ku socda ka dib markii dillaacyo laga helay gawaarida. Rakaabka ayaa looga digay dib udhacyada iyo joojinta adeega.
Sida lagu sheegay warbixinnada maxalliga ah, in ka badan 1,000 tareen oo ka socda diyaaradaha GWR iyo LNER ayaa la baaray.
GWR waxay ka digtay "carqalad weyn," iyadoo hawlwadeenada kale ay soo saaraan qoraallo isku mid ah.
GWR iyo LNER waxay ku booriyeen rakaabka inay ka fogaadaan safarka sabtida dib udhac iyo dib udhac. Shirkadda PTE ayaa kula talisay in aan loo isticmaalin wadada loo maro Newcastle iyo Liverpool, halka Hull Trains ay ku boorisay rakaabka inay hubiyaan jadwalkooda safarka.
Go'aanka ayaa la gaadhay ka dib markii la helay dildilaacyo xariiqa timaha intii lagu jiray dayactirka joogtada ah ee laba tareen oo Hitachi 800 ah. GWR waxay sheegtay in dildilaacyadu ay ahaayeen "meelaha nidaamka hakinku uu ku dhegan yahay jirka gaariga."
"Waxaa laga helay in kabadan hal tareen, laakiin ma ogin dhab ahaan inta tareen sababtoo ah raxan wali waa la baarayaa," ayuu yiri afhayeenka GWR.
Hawl wadeenada ayaa sheegay in arinta uu baarayay Hitachi, isla markaana marka kormeerka degdega ah la sameeyo, tareenada ay ku laaban doonaan howlahooda sida ugu dhaqsiyaha badan.
Bishii la soo dhaafay, GWR waxay qaadatay lix tareen oo shaqada ka maqnaa ka dib markii la helay dildilaacyo xariiqa timaha. Laakiin waqtigaas, bixitaanku wax saameyn ah kuma yeelan adeegyada rakaabka.